16 Cimilada - Ku soo dhowow Nederland
Way is bedbedeshaa
Cimilada Nederland way is-bedbedel badan tahay. Laakiinse kulaylka ka dhaca waddamada Koonfurta Yurub amase qabowga badan ee ka jira waddamada Waqooyiga Yurub kama dhacaan Nederland. Cimilada Nederland waa waxaa saameyn ku leh badda, oo jiilaalkeedu aad uma qabooba, gugeeduna aad uma kulula.
Saamaynta Badda Waqooyi Ku leedahay cimilada
Badda Waqooyigu saamayn aad u weyn bay ku leedahay cimilada Nederland. Sidaa daraadeed cimilada Nederland sannadka oo dhan waa mid degan. Galbeedka waddanka ee xigga dhinaca Badda Waqooyi cimiladu aad isuma bedbedelo marka loo fiiriyo dhinaca bariga dalka. Dhinaca bari jiilaalku waa ka sii qabow yahay, gu'guna wuu ka kulul yahay meelaha kale. Xataa maalinta dhexdeeda ayaa is-bedbedel ka dhacaa.
Jiilaalku aad buu ugu qabow yahay Soomaali badan oo Nederland ku nool. Dadka reer Nederland waxay keliyoo qabow badan dareemaan marka baraf badan dhaco, oo dhulka in badan oolaya. Carruurtu barafka way ka helaan. Waxay barafka ka dhisaan sawiro ama qaabab kala duwan bay u sameeyaan. Waxay sameystaa baabuur alwaax ka samaysan oo ay barafka ku dul sabiibixiyaan, kuwaasoo ay ku ciyaaraan. Ciyaarta barafka 'schaatsen' ayay dadka reer Nederland aad uga helaan, taasoo berigii hore aad loo ciyaari jirey marka hadda la barbardhigo. Waayo beryahan cimiladii ayaa yara kululaatay. Haddii barafku aad u badan yahay waxaa gobolka Friesland lagu qabtaa ciyaarta 'Elfstedentocht', taasoo ah tartan la isu maro kow iyo toban magaalo oo Friesland ku yaala, dhererkeeduna yahay 200 km. Qofka ku guulaysta ciyaartan caan buu noqdaa. 1997 ayay ahayd markii ugu dambaysay ee ciyaartan oo kale la qabto.
Roobka iyo qoraxda
Dhinaca xeebta ayaa ugu qorax badan, halkaasoo ilaa 1600 oo saacadood qoraxdu ka jirto. Dhinaca 'achterhoek' waxay qoraxdu ka jirtaa 1450 saacadood. Dad badan oo reer Nederland ah iyo kuwo aan ahaynba waxay aaminsan yihiin in waddankan roobku aad uga da'o. Run ahaantii roobku kuma yara Nederland, oo wuxuu ka da'aa 7% sannadkii. Meesha ugu roobka badani waa Weluwe, Drenthe iyo Zuid-Limburg. Laakiin qof kastoo Nederlander ahi wuxuu leeyahay dallad ama dhar roobka loo gashado.
Maahmaahyada iyo Halhaysyada
Aad bay reer Nederland cimilada uga hadlaan, waayo iyadaa aad isu bedbedesha. Marna si hubsiimo ah uma ogaan kartid sida cimiladu maalintaa noqon doonto. Isla markiiba way is bedeli kartaa. Su'aal aad badanaa la isu weydiiyaana waa: 'Berito sidee cimiladu noqonaysaa'? Maahmaahyo badan oo cimilada la xidhiidhaana waa jiraan. Tusaale ahaan:
'Niets is so veranderlijk als het weer', oo macnaheedu yahay 'wax cimilada iska bedbedel badani ma jirto'.